Chelsea iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareega Quarter-Finalka Champions League… – Hagaag.com
Chelsea iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareega Quarter-Finalka Champions League…
Posted on 18 Maarso 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa sheegay in kooxdiisu aysan ka baqaynin koox kasta oo ka tirsan tartamada Yurub, ka dib markii kooxda Ingriiska ay u soo baxday wareega 8da markii ugu horeysay tan iyo 2014, ka dib guushoodii 2-0 ee ay ka gaareen Atletico Madrid Arbacadii.
Hakim Ziyech iyo Emerson Palmeri ayaa shabaqa soo taabtay, iyadoo Chelsea ay ku soo baxday wadarta 3-0 oo ay labada lugood uga badisay Atlético Madrid, waxaana ay sii dheereystay rikoorkooda ah inaan laga badin 13 kulan tartamada oo dhan, tan iyo markii Tuchel uu qabtay xilka ka dib markii laga ceyriyay Frank Lampard.
“Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan u qalano,” ayuu yiri tababaraha Jarmalka. “Natiijooyinka noocan oo kale ah waxay ku siinayaan dhiirigelin inaad ku gaarto waxyaabo aan caadi ahayn.”
Wuxuu sii raaciyey, “Waan hubaa in qofna uusan rabin inuu naga hor yimaado. Wuxuu noqon doonaa tartan adag .. Laakiin waqti kadib waa inaanan cabsan. Waxaan wajihi doonaa tartame kasta oo bakhtiyaa-nasiibka na kulmiya.”
Tuchel ayaa yiri, “Waa inaan hormarinaa weerarada rogaal celiska ah, waa inaan marwalba ka fikirnaa inaan horay u socono oo aan ka faa’iideysano xawaaraha iyo booska. Waxaan raadineynaa inaan noqono kuwo wax ku ool ah oo si sax ah wax u qabta.”
Chelsea oo kaalinta afaraad kaga jirta horyaalka ayaa Axada martigelin doonta Sheffield United wareega afaraad ee FA Cup.
Tuchel wuxuu kacaan ka sameeyay Chelsea, taasoo uu ka badbaadiyey inay qarqanto natiijooyin xumada iyo waxqabadkii Lampard, wuxuuna si dhaqso leh ugu jiheeyey dhinaca guulaha ee is xig xigay, maadaama uu 13 kulan uu ciyaaray oo aan laga badinin, isagoo badiyay 9 ka mid ah kulamadaasi, wuxuuna kooxda ka dhigay mid nadiif ka ah 11 kulan in shabaqooda la soo taaban.
Dhinaca kale kooxda Bayern Munich aya 2-1 uga badisay Lazio ciyaartii la qabtay Arbacadii, waxayna ku soo baxday wadar ahaan 6-2.
Sidaa darteed waxaa soo baxay sideed kooxood oo qori tuur loo sameyn doono, seddax kooxood waxay ka soo jeedaan Ingriiska, waa Chelsea, Liverpool iyo Manchester City, halka labo koox ka soo jeedaan Jarmalka, waa Bayern Munich iyo Borussia Dortmund, halka min hal koox ku matalaya Spain oo ka socota Real Madrid iyo Portugal oo ka socota Porto iyo France oo ku mataleysa PSG.